I-Lumbar Puncture (okanye i-Spinal Tap)
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngo-Dec 6, 2019.
I-lumbar puncture, ekwabizwa ngokuba yimpompo yomqolo, isebenzisa inaliti ukususa isampulu yolwelo kwindawo ejikeleze intambo yomqolo. Olu lwelo lwaziwa njenge-cerebrospinal fluid (CSF). Uvavanyo lusetyenziselwa ukufumanisa isifo, njenge-meningitis, kunye neemeko ezithile zemithambo-luvo.
Ndilungiselela njani uvavanyo?
Uya kudinga ukusayina ifom yemvume, efuneka ngokubanzi xa inkqubo yenziwa ngaphandle kwemeko engxamisekileyo. Xelela ugqirha wakho kwangethuba ukuba ukhe wanayo i-lidocaine okanye iyeza elenzakalisayo elisetyenziswa kwi-ofisi yamazinyo.
Oogqirha benza uviwo ngokwasemzimbeni kwaye kwezinye iimeko bayalela i-CT ukuskena kwengqondo ngaphambi kokucebisa nge-lumbar punct. Ukuskena kwe-CT kwenziwa xa oogqirha bekrokrela ingxaki yezonyango enokuthi ikubeke emngciphekweni wokuhamba kwengqondo ngexesha lenkqubo, into enqabileyo kodwa enzima kakhulu.
Kwenzeka ntoni xa kwenziwe uvavanyo?
Uninzi lwezigulana zinxiba ilokhwe yasesibhedlele. Ngokuqhelekileyo, ulala ngecala lakho ngamadolo akho ahlanganisene nesifuba sakho. Kwezinye iimeko, ugqirha ucela ukuba uhlale kwaye uncike phambili etafileni.
Ugqirha uziva umqolo wakho ukuze ufumane i-vertebrae yakho esezantsi kwaye uziva amathambo ngasemva kwesinqe sakho. Indawo kumqolo wakho osezantsi icocwe kakuhle ngesisombululo sokubulala iintsholongwane. Iyeza lifakwa ngenaliti encinci ukuze ibambe isikhumba kunye nezicubu ezingaphantsi kolusu kwindawo apho inaliti yomqolo iya kufakwa khona. Oku kubangela ukuqaqamba okufutshane.
Inaliti yomqolo inciphile kakhulu. Ugqirha ufaka inaliti yomqolo phakathi kwendawo yomqolo. Inaliti ityhalelwa phambili kancinci de ifike kumjelo womqolo. Ugqirha uyema xa ulwelo luqala ukukhupha inaliti yomqolo ukuya kwityhubhu yovavanyo olungenazintsholongwane.
Ngenxa yeyeza elibandayo elisetyenziswa kule ndawo, uninzi lwezigulana zinamava oxinzelelo kuphela kule ntshukumo. Ngamanye amaxesha ezinye izigulana ziye zifumane imvakalelo ebukhali ngasemva okanye (kunqabile) emlenzeni. Yazisa ugqirha wakho ukuba uziva unentlungu.
Ngamanye amaxesha ugqirha ulinganisa uxinzelelo lolwelo ngaphambi kokuthatha isampulu. Uxinzelelo lulinganiswa ngombhobho okhangeleka ngathi yithemometha enkulu ebanjwe inaliti. Isampulu yolwelo eqokelelweyo ihlala ingaphantsi kweetafile ezintathu. Awuyi kuva ukungonwabi xa ususwe. Emva koku, inaliti iyakhutshwa. Ngokwesiqhelo i-Band-Aid kuphela kwendlela yokunxiba eyimfuneko.
Ukugqobhoza yonke i-lumbar, kubandakanya ixesha lokuseta, kuthatha imizuzu engama-30-45. Inaliti ibekwe kufutshane nomzuzu omnye.
Zeziphi iingozi ezikhoyo kuvavanyo?
Umngcipheko oqhelekileyo wokugqobhoza i-lumbar kukuba kunokubangela intloko yesikhashana. Ukulala phantsi iiyure ezimbalwa emva kovavanyo kunokubangela ukuba iintloko zingabikho. Ezinye iingxaki zinqabile kwaye zibandakanya usulelo okanye ukopha. Ngenxa yokuba umthamo wamanzi umncinci, i-lumbar puncture phantse ayinakubangela intshukumo yengqondo okanye intambo yomqolo, ingxaki enkulu.
Ngaba kufuneka ndenze nantoni na ekhethekileyo emva kokuba uvavanyo luphelile?
Unokuxelelwa ukuba ulale phantsi okwethutyana emva kovavanyo, ngamanye amaxesha iiyure ezimbalwa.
Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba iziphumo zovavanyo zaziwe?
Kuxhomekeke kuvavanyo olwenziwe kwisampulu yolwelo, iziphumo zithatha naphina ukusuka kwiiyure ezimbalwa ukuya kwiintsuku ezimbalwa.
I-terbinafine hcl 250 mg ithebhulethi
m 15 ipilisi eluhlaza
uqhagamshela njani kwiphepha le-facebook
uxinzelelo lwegazi oluphezulu amagama eepilisi
yintoni ioli yokuthambisa